राष्ट्रिय भावनाका गीत गाएर फरक पहिचान बनाएका गायक - Merodesh.news
राष्ट्रिय भावनाका गीत गाएर फरक पहिचान बनाएका गायक
फिल्मी तामझाममा फसेपछि हत्तपत्त को पो बाहिरी दुनियाँमा आउन सकेको छ र ? यो तामझाममा फस्ने कलाकार मात्रै हैन गायक गीतकार, संंगीतकार प्रायको झुकाव फील्मी क्षेत्रमै फैलन गरेको छ । फरक यत्तिमात्र हो कोही नामी र दामी त कसैको जीवन नाम र दामको संघर्षमै वित्ने गरेको छ । सपनाो पनि एउटै लक्ष्य बनाएर उनीहरु फिल्मबाटै आफनो नाम र कलालाई चर्चित बनाउन चाहन्छ, लागिपर्छन । र, साथीभाईलाई आफनो प्रगती सुनाउँछन र गर्व गर्छन । मिडियामार्फत आम नागरिकलाई धमास लगाउँछन – मेरो यो गीत यो फिल्ममा छ, यसरी हिट भयो यो र यतिधेरै हिट गीत (गाए , दिएँ , लेखे , गाउँदैदु, लेख्दैछु, दिदैछु )। प्राय रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिका मार्फत सबैले सुनिरहेकै हुन्छौ । आखिर यो नै फील्मी क्षेत्रको विशेषता पनि त हो । जसलाई हामी गल्यामर पनि भन्नेगर्छौ ।
तर विराटनगर ४ बरगाछी बस्ने एक जना गायक छन सुमित खडका । उनी फील्मी क्षेत्रमा जमेर पनि त्यहाँ भुलेनन् । बाहिर आएर आफनो अलग्गै पहिचान बनाउन लागिपरेका छन । गाउनमा मात्र हैन संगीत कम्पोज गर्नमा पनि राम्रो दखल छ उनको । तर उनी फिल्मी दुनियाँको तामझामबाट अलग्गै हटेर आजकल राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीतहरु गाईरहेका छन । आफनो अलग्गै पहिचान बनाउन निरन्तरलागिरहेका गीतकार सुमित भन्छन – “नेपालमा राष्ट्रगीत गाउने गायकको पहिचान बनाउँदै नागरिकमा राष्ट्रभावना जगाउन राष्ट्रगीत गाउन थालेको हुँ ।”
स्कुल क्याम्पसमा पढदा डेस्कवेन्च बजाएर गीत गाउने र कहिँ कतै सामाजिक उत्सव भएको थाहा पायो कि दौडिहाल्ने बानी सानैदेखी भएका सुमितले २०४८ देखी विराटनगरका संगीतकार चन्द्र थापालाई गुरु थापेर होमिएका हुन गीतसंगीतको दुनियाँमा । त्यसपछि काठमाण्डौमा विजयसिँह मुनाल र शक्तिबल्लभको संगीतले उनी निरन्तर यही क्षेत्रमा सकृय भैरहेका छन ।
सुमितले गीत गाउन थालेको २०५२ देखी हो । जब उनले रेडियो नेपालमा आधुनिक गीत प्रतियोतिामा दोस्रो स्थानप्राप्त गरे उनको गीत गाउने यात्रा पछि हटेन । उनले हालसम्म दुई दर्जन नेपाली चलचित्रमा गीत गाइसकेका छन । धेरै अझैसम्म चर्चित पनि छन । चलचित्र जमीन, हतियार, दोधार, त्रिबेणी लगायतका चलचित्रमा उनले गीत गाएका छन । छाना सिसाको आउन माया सँगै बसौ छैन रिसाको, दोधार फिल्ममा गीत गाउने सुमित नै हुन । तिनै सुमित आजकल राष्ट्रीय भावनाले ओतप्रेत भएका गीतहरु गाएर फरक पहिचानलाई स्थापित गराउन व्यस्त छन । उनले हालसम्म एकसय भन्दा वढी शोहरुमा राष्ट्रिय भावनाका गीत गाईसकेको दावी गरेका छन । तीनबटा राष्ट्रिय भावनाका गीतहरुको एल्बम पनि निकालिसकेका छन ।
राष्ट्रिय भावनाका गीत गाउँदै सम्मान पाउँदै
राष्ट्रगीत गाउन उनी नेपालका धेरै शहरबजारमा पुगीसकेका छन । सुमितले भारतको अछाम, दाजिंलिङ र चीनको हङकङमा पनि पटक पटक गएर राष्ट्रगीत गाएर नेपालीहरुमा आफनो राष्ट्र सम्झाउन सफल भएका छन । उनले नेपालको मोरङ, सुनसरी, झापा, ईलाम देखी काठमाण्डौ र पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म पुगेर राष्ट्रिय गीत गाईसकेका छन । दुई पटक हङकङ पुगेर सुमितले १२ बटा शो गरेर त्यहाँका नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय भावनाका गीत सुनाएर भावुक बनाउन सफल भएका थिए ।
त्यहाँ राष्ट्रिय गीत सुन्नकै लागि नेपालीहरु नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हल्लाउँदै आएका थिए । गीत सुनेपछि नेपलीहरु आफनो देश सम्झेर रोएनन मात्र उनलाई सम्मान पनि गरे । राष्ट्रिय गीत गाउन भारतको सिलोङ गएका थिए उनी त्यहाँ पनि उनलाई नेपालीहरुले भावविभोर हुँदै सम्मान गरेका थिए । त्यसवाहेक देशभित्रै धेरै ।
मधेश आन्दोलनबाट सुरु भएको हो अभियान
हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई बोलका गीतकार संकर खरेलले लेखेको गीतदेखी उनले राष्ट्रिय गीत गाउन थालेका हुन । मधेश आन्दोलन उत्कृषमा पुगेको बेला थियो । पहाडी र मधेशी समुदायका मानिसहरु बीच सम्प्रदायिकता फैलाउनेहरु सकृय थिए । कतिखेर जातियहिँसा भडकिने हो थाहा थिएन । मानिशहरु जातियहिँसा नभडकियोस भनेर सदभाव रयाली निकाल्न सकृय भैसकेका थिए । हो, यहीबेला गायक सुमितलाई पनि लाग्यो देशकालागि देशको राष्ट्रियताकालागि केही गर्नुपर्छ, अनि उनले गायक सङ्कर खरेलले लेखेको गीत हिमाल पहाड तराई यहा कोही छैन पराई गाए ।
त्यो गीतको एकल एल्बम निस्कियो । गीत धेरै चर्चित भयो । दजनौ स्टेजहरुमा उनले त्यो बेला गीत गाए । जसले के मधेशी, के पहाडी सबैको मन छोयो उनले वाहवाही पाए । सुमित भन्छन – “मैले राष्ट्रीय गीत गाएको सुनेर नै मलाई हङकङका नेपालीहरु मात्रै राष्ट्रिय गीत गाउन बोलाएका हुन, दुई पटक गईसके ।” उनको गीत सुनेर हङकङका नेपालीहरुले उनलाई सम्मान पनि गरेका थिए । सुमितले गीतकार संकर खरेलेको हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, गीतकार नबराज सुब्बाको हामी पहिले नेपाली अनि मात्र अरु, देशको माया लाग्छ बोलको गीत गाएर एकल एल्बम पनि निकालेका छन । चाँडै राष्ट्रिगीतको संग्रह एल्बम निकाल्ने तैयारीमा छन उनी । हालसम्म देशविदेशमा एकल र संयुक्त्तगरेर एकसय बढी स्थानमा राष्ट्रिय गीत गाईसको सुमितको दाबी छ ।
सुमिले द्धन्द्धकालमा हामी शान्ति चाहन्छौ युद्ध चाहदैनौ भनेर साँगीतिक शान्ति यात्रा पनि चलाएका थिए । सुमित केही दिनभित्रै राष्ट्रिय गीतको एकल शो गर्ने तैयारीमा जुटिरहेका छन अहिले । विराटनगरको वरगाछी स्थित घरमा गीतको रियाज र कम्पोजमा तल्लिन रहेका उनले भने – “एकल शोमा आफैले गाएका १८ बटा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीतहरु सुनाउने तैयारी गरिरहेको छु ।”
सुमितले देशको माया लाग्छ एल्बममा आठ वटा राष्ट्रिय गीतहरु संग्रह गराईसकेका छन । जसमा गीतकार नवराज सुब्बा, तारानाथ गौतम, भुषण खरेल, चुडामणी देवकोटा, गोविन्दि गिरी प्रेरणा, ध्रुवराज पौडले, लगायतका गीत समेटिएका छन । संगीतकार शक्त्तिबल्लभको संगत मनपाउने सुमितले आफना धेरै गीत उनकै संगीतमा गाएका छन ।
राष्ट्रिय भावनाका गीतले जीविका धान्न सक्छ
आधुनिक र पप गीतसंगीतले आजकल धेरै व्यवसायिकता ग्रहण गरिसकेको छ । तर राष्ट्रिय गीतले व्यवसायिकता ग्रहण गर्न नसकेको र आफु व्यवसायिककरण गराउने अभियनमा पनि लागेको सुमितको भनाई छ । तर व्यवसायिकरण गराएर राष्ट्रियगीतलाई भ्रष्टिकरण गर्ने हैन, अरुगीत जस्तै हरेक नेपालीले राष्ट्रिय गीत सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ ।
समित भन्छन – “हामी नेपालीले विदेशीको गीत सुन्न चासो वढी दिन्छौ तर आफनै राष्ट्रिय गीतलाई हेला गर्छौ कहिले सुन्दैनौ ।” उनी नेपाली माटो, भावना र भेषभुषा सुहाउँदो नेपली राष्ट्रिय गीतहरु हरक चोक र गल्लीका पानपसल, होटल, यातायात, सिनेमा हल आदि सार्वजनिक स्थलरुदेखी नेपली संचारमाध्यमहरुमा गुन्जिनुपर्छ, सुमितको ईच्छा छ । उनलाई नेपाली ंसंचारमाध्यमहरुले राष्टियत गीत बजाउन पनि गायकहरुसँग शुल्क माग्ने गरेको चित्त बुझेको छैन ।
टीभी एफएम र पत्रपत्रिकाहरुले धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रिय गीतको निशुल्क प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । गायक सुमित सवै गीतकार, गायक र संगीतकारहरुले राष्ट्रिय भावनाका गीतलाई महत्वदिएर व्यवसायिकरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय गीतले पनि अरु गीतले जस्तै कलाकारको जीवन धान्न सक्ने उनको धारणा छ । यसैले राष्ट्रिय गीत गाउने लेख्ने, संगीतभर्ने र उनीहरुलाई सहयोग गर्नेहरुको सख्या बृद्धिहुनुपर्ने सुमित बताउँछन । व्यपारिक सस्था र अन्य आयोजकहरुले साँगीतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दा पश्चिमकरणका गीतहरुलाई हैन की राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुमित बताउँछन ।
सुमित राष्ट्रियभावनाका गीत भनेको खस नेपाली भाषामा मात्र हुनुपर्ने वाध्यता पनि मान्दैनन । नेपाली, मैथिली, उर्दु, नेवारी, आठपरिया, भोजपुरी, आदी स्थानिय जुनभाषामा पनि राष्ट्रिय गीत लेख्नु र गाउनुपर्ने बताउँछन । राष्ट्रिय गीतमा एकता र राष्ट्रियताको भावना भने हुनैपर्छ, उनी भन्छन । राष्ट्रियता भनेको सवैजातजातीलाई एकै भाषाभाषी बनाउनु राष्ट्रियता हैन बरु सबै भाषाभाषीको सम्मान गर्नु राष्ट्रियता हो – उनको बुझाई छ । उनले हङकङमा राष्ट्रिय गीत गाएर ७० लाख रुपैया त्यहाँका नेपालीहरुको साझा भवन बनाउन संकलन गरिदिएका थिए । त्यहाँ नेपालीहरुले भवन निर्माणको सहयोगार्थ भनेरै नेपाली राष्ट्रिय गीतहरुको एकल शो आयोजना गराएका थिए ।
देशकालागि कर्तब्यको विकास गर्न राष्ट्रिय भावनाका गीत
आधुनिक गीत गाउने तामझामपुर्ण फिल्मी क्षेत्रमा समेत जमिसकेका गायक सुमितले राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीतहरु नै किन गाउन थालेको त ? सुमित भन्छन,– “देशकालागि राष्ट्रकालागि, देश जोगाउन, आफनो कतब्यको विकास गर्न ।” उनले गीतकार चुडामणी देवकोटोको गीत फुलबाट वारुदको गन्ध आयो गाएपछि चर्चा मात्र पाएनन उनको मनलाई पनि छोयो । त्यसपछि उनले २०५५ मा उनले राष्ट्रिय गीत प्रतियोतिामा उनले कमल परियारको संगीतमा विश्वबल्लभले लेखेको गीत गाएर उत्कृष्ट गीत गाएको चर्चा पाए ।
त्यसपछि निरन्तर राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीत गाउदै आएका सुमितलाई आजकल स्टेजमा वोलाउँदा पनि दर्शक श्रोता र आयोजकले आधुनिक अन्य गीत हैन राष्ट्रिय गीत गाउनकैलागि आग्ह गर्छन, बोलाउँछन । यसलाई सुमितले आफनो सफलता पनि मानेका छन । उनी राष्ट्रिय गीत भनको कुनै अमुक पार्टीको नहुने र त्यो साझा हुनुपर्ने मान्यता राख्छन । “जस्तोसुकै गीत राष्ट्रिय भावनको गीत हुन नसक्ने र शब्द, संगीत र स्वरले सुन्नेको मन र मुटुमा छुने नेपाली माटो, भाषा, सस्कृतिले ओतप्रेत भएको गीत मात्रै राष्ट्रिय गीत हुन्छ” – सुमित भन्छन ।
नेताको भाषण भन्दा कलाकारको गीत झन धेरै नेपाली राष्ट्रियताको भावनालाई झंकार्न सक्ने उनको बुझाई छ । उनी हरेक कलाकारलाई राष्ट्रियता सम्वन्धि गीत गाउन सुझाव पनि दिन्छन । विदेशका नेपालीहरुलाई गीत सुनाउन गएका बेला उनलाई अनुभुति भयो, राष्ट्रियताको भावनाले विदेशमा भित्रैबाट छुँदो रहेछ । तर नेपालमा त नेपालको माया गर्नेभन्दा पनि गाली गर्ने नेपालीरु बढेकोमा सुमितलाई चिन्ता लागेको छ । यसैले देशकालागि हरेकले राष्ट्रिय गीत सुन्नुपर्छ सुमित भन्छन । सुमितले गीतकार नारायण राजबंशीको रचनामा हाम्रो विराटनगर बोलको गीत गाएर स्थानियताको एकतालाई पनि चर्चा दिलाएका छन ।
राष्ट्रिय भावनाका गीतले पहुच पनि वढायो
राष्ट्रिय गीत गाएकैले ०७ सालकी क्रान्तिमा संलग्न भएकी रानुदेवी अधिकारीसँग गीत गाउन पाएकोमा सुमितलाई झन हौसला मिलेको छ । यस्तै राष्ट्रपति रामबरण यादव देखी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला, सुशिल कोईराला, सुजाता काईराला, वामदेव गौतम, विद्याभण्डारी, वामदेव गौतम, माधव नेपाल, डा बाबुराम भट्टराई कैयौ नेताहरु सहभागी भएको कार्यक्रममा सुमितले राष्ट्रिय भावनका सुनाई सकेका छन ।
फरक पहिचानले हौस्यायो
राष्ट्रिय भावनाका गीतहरु गाउन थालेपछि सुमितलाई आफनो पहिचानले निक्कै फडको मारको महशुस भएको छ । उनी भन्छन, फील्मी क्षेत्रमा मात्रै सिमिती भएको भए मैले दाम कमाउन सकेपनि गीत चल्न छाडेपछि म पनि चल्न छोडने थिँएँ तर अहिले मेरो फरक पहिचान भएको छ।, आफनो चुलिँदो नामको चर्चाले मख्ख पर्दै गएका सुमित राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रेत भएका गीत लेख्न गीतकार र संगीतभर्न संगीतकारलाई होस्याउँदै पनि छ । उनी आफैपनि हौसिएर नयाँ नयाँ सृजनात्क उपायहरु निकालेर आम नागरिकलाई राष्ट्रिय भावनाका गीत सुनाउने योजना ल्याइरहेका छन ।
उनले भविश्यमा चाँडै राष्ट्रिय गीत लेख्ने, संगीतभर्ने र गाउनेहरुलाई एकै ठाउँ भेला गराएर राष्ट्रिय गीतको अवस्था , महत्व र सृजनशिलताबारे छलफल गराउने र क्लब बनाउने सोच बनाएका छन । हौसिएका गायक सुमित चाडै शानित र संविधान हामो हैन राम्रो भन्ने सागीतिक अभियान लिएर गाउँ गाउँमा जानलागको सुनाउँछन । नेपाली संगीत विगार्नेहरुमा धनीमानी बाबुआमाका छोराछोरी रहेको र उनीहरुलाई पनि राष्ट्रिय गीतले आर्कषित गर्न सकिने सुमितको भनाई छ ।
सुमितले गाएका राष्ट्रिय भावनका गीतहरु
हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई । हामी पहिले नेपाली अनि अरु । झुक्या छैन कहिल्यै र झुक्ने छैन कहिल्यै । फुलबाट बारुदको गन्ध आयो । जन्मियौ हामी नेपालमा नेपालमै मर्न पाऔ । तिम्रो रगत आखिर मेरै जस्तो होला । जागे नेपाली उठे नेपाली । मन र माटोको पबित्र यो नाता । अरुको लाख आमाको काख कसरी खोसिन्थ्यो । जुनै आकाश मुनी पनि म हिमाली छाँया देख्छु । नेपाली नेपाली अघिबढ क्रान्ति झण्डा लिएर । आफनो देशको क्रान्ति युद्धमा हाम्रो एक पुकारा छ ।